Horudhac: Aston Villa vs Chelsea… (Blues oo bilaabaysa dagaalkeeda kaalinta afaraad & Villa oo doonaysa inay iska badbaadiso inay ka dhacdo horyaalka EPL) – Gool FM
Horudhac: Aston Villa vs Chelsea… (Blues oo bilaabaysa dagaalkeeda kaalinta afaraad & Villa oo doonaysa inay iska badbaadiso inay ka dhacdo horyaalka EPL)
(Birmingham) 21 Juun 2020. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa maanta oo Axad ah dib ugu soo laabanaysa ciyaarista horyaalka Premier League markii ugu horreysay muddo saddex bilood iyo dheer ah, marka ay booqanayso Aston Villa oo ka mid ah kooxda ku jira kaalimaha looga laabto horyaalka.
Tababare Frank Lampard kooxdiisa ayaa dib u bilaabeysa dagaalkeeda qaabkii ay ugu dhammaysan lahayd kaalinta afaraad, halka Villa ay wali ku jirto kaalinta 19-aad ee kala sarreynta horyaalka kaddib barbaro goolal la’aan ah oo ay la galeen Sheffield United Arbacadii.
Taariikhda: Axad 21 Juun 2020
Saacadda ay bilaabaneyso dheesha: 6:15 Maqribnimo xilliga geeska Afrika.
Daafaca galabka midig ee Aston Villa, Frederic Guilbert ayaa laga yaabaa inuu kulankan ku lug lahaado kaddib dhaawac jilibka ah oo uu la maqnaa, laakiin Bjorn Engels ayaa weli maqnaanaya.
Xiddiga ay amaahda ku haysato Aston Villa ee Danny Drinkwater ayaan wajihi karin kooxda milkiyaddiisa iska leh ee Chelsea.
Daafaca Chelsea ee Fiikayo Tomori ayaa wajahaya 10 maalmood oo maqnaansho ah, sababtoo ah waxa uu sheeganayaa dhaawac muruqa ah, halka Callum Hudson-Odoi uusan taam u aheyn inuu ku lug yeesho kulankan, isla markaana Jorginho waa inuu dhammeystirto ganaax labo kulan ah.
Ruben Loftus-Cheek ayaa diyaar ah kulankan markii ugu horreysay tan iyo markii uu dhaawac ka soo gaaray 13 bilood ka hor.
>- Aston Villa ayaa guuldarro la kulantay sagaal ka mid ah 10-kii kulan ee la soo dhaafay oo ay horyaalka ku kulmeen labadaan kooxood, iyadoo guushaas kaliya ku gaartay garoonkeeda bishii Maarso sanadkii 2014-kii.
>- Chelsea ayaa haatan shan kulan oo xiriir ah horyaalka kaga adkaatay Villa, waana heerkoodii ugu fiicnaa kulanka labadan kooxood dhex mara.
>- Kani waa kulankii 50-aad ee horyaalka Premier League ku dhexmara labadaan kooxood, iyadoo Chelsea ay gaartay 25 guul, halka Villa ay adkaatay 12-kulan, waxaana ay barbaro galeen 12 kulan oo kale.
>- Kooxda Tababare Dean Smith ayaa kaliya labo dhibcood ka heshay 21-kii kulan ee ay horyaalka Premier League ku wajaheen lixda kooxood ee sare, tan iyo markii ay garaaceen iyagoo marti u ah Spurs bishii April sanadkii 2015-kii.
>- Kaddib barbarihii Todobaadkii hore ay Villa la gashay Kooxda Sheffield United ayaa soo gabagabaysay afar kulan oo xiriir ah oo la garaacay horyaalka Premier League.
>- Waxa ay Villa shabaqood gool ka ilaashan karaan labo kulan oo xiriir ah markii ugu horreysay tan iyo markii barbaro goolal la’aan ah ay garoonkooda kula galeen Kooxaha Sunderland iyo Crystal Palace bishii December 2014 iyo January 2015.
>- Guul ay Villa gaarto maanta oo Axad ah ayaa ka dhigaysa kooxdii labaad ee guuleysata taariikhda horyaalka kulan kasta oo ay ciyaartay todobada maalmood ee Isbuuca muddo hal xilli ciyaareed ah, waxaana ay barbareyn doontaa Tottenham oo sidaas oo kale wada badisay maalmaha todobaadka oo dhan muddo hal xilli ciyaareed ah kal ciyaareedkii 1986-87.
>- Guushooda kaliya ee ay Villa gaartay siddeedii kulan ee ugu dambeysay horyaalka waxa ay gurigooda kaga gaareen kooxda Watford 21-ka bishii Janaayo.
>- Chelsea ayaa guul gaarin mid kasta oo ka mid ah afarteedii kulan ee Premier League ay marti ahaayeen oo ay ku soo ciyaareen meel ka baxsan garoonkooda sanadkan 20202, waxaana ay wataan 3 barbaro iyo 1 Guuldarro, iyagoo guuleystay todob ka mid ah sagaalkii kulan ee markaas ka hor ay dibadda ku soo ciyaareen.
>- The Blues ayaan guul ku soo gaarin horyaalka Premier League meel ka baxsan Magaalada London tan iyo markii ay soo garaaceen Kooxda Watford oo ay booqdeen 2 bishii November.
>- Blues waxaa loo diiwaan gelin karaa maanta kulamo isku xiga horyaalka Premier League kaliya markii labaad xilli ciyaareedkan, waxaana ay lix kulan oo xiriir ah guuleysteen horyaalka intii u dhaxaysay bilihii September iyo November.
>- Kooxda Tababare Frank Lampard ayaa laga dhaliyey 39 gool oo horyaalka ah xilli ciyaareedkan haatan soconaya, waana in ka badan goolashii laga dhaliyey guud ahaan xilli ciyaareedkii hore ee 2018-19.
>- Kooxda Chelsea ayaa ku tala jirta inay shabaqeeda gool ka ilaashato horyaalka kulammo isku xiga markii ugu horreysay xilli ciyaareedkan.
>- Lampard ayaa kaliya guuleystay afar ka mid ah 16-kiisii kulan ee Premier League uu booqday garoonka Villa Park isagoo ciyaarayahan ah, waxaana uu ka soo qaatay 4 guul, 8 barbaro iyo 4 guuldarro, waxaana uu labo gool ka dhaliyey kulankiisii ugu dambeeyey ciyaar ay Blues ku adkaatay 2-1, taasoo uu ku noqday gooldhaliyaha ugu sarreeya Chelsea taariikhda taasoo uu illaa iyo hadda yahay.
>- Olivier Giroud ayaa dhaliyey siddeed gool lixdiisii kulan ee uu wajahay Aston Villa tartammada oo dhan, dhammaan markii uu goolashaas ka dhalinayeyna waxa uu u dheelayey Kooxda Arsenal.
>- Tammy Abraham ayaa dhaliyey 26 gool 40 kulan oo uu u saftay kooxda Aston Villa oo uu amaah kula joogay xilli ciyaareedkii la soo dhaafay.
Jurgen Klopp oo talaabo u jira inuu rikoodh taariikhi ah ka sameeyo kulanka Everton
Horudhac: Everton vs Liverpool… (Reds oo u dabaal dagi karta hanashada horyaalka Ingiriiska soddon sano kaddib)